Ururka Al-qaacida oo qiray dilka hogaamiyahoodii Sh. Usaama bin Laden, kuna baaqay weeraro hor leh & aar goosi. – Radio Daljir
Sida lagu xaqiijiyey hadal uu soo saaray ururka Al-qaacida, laguna faafiyey baraha internet-ka ee ururada xiriirka la leh ururka Al-qaacida, hogaamiyhii Al-qaacida Sh. Usaama bin Laden ayaa lagu dilay weerarkii ay fuliyeen ciidamada Maraykanka.
?Dhiiga Usaama ma noqon doono mid la khasaariyo …ururka Al-qaacida hadii Alle qadaro waxa uu sii wadayaa in uu weeraro Maraykanka iyo xulufadiisa, dhimashada hogaamiye Sh. Usaama waxaa ay qalad ku noqon doontaa Maraykanka; farxadoodu waxa ay isu bedeli doontaa murugo, dhiigoodu waxa ku milimi doonaa ilmadoodu? ayaa lagu yiri hadalka ururka Al-qaacida.
Ururka Al-qaacida ayaa ka dalbay shacabka reer Pakistan in ay sameeyaan kacdoon dadweyne oo ka dhan ah maraykanka iyo xulafadiisa.
Hogaamiyihii ururka Al-qaacida Sh. Usaama ayaa lagu dilay weerar ay fuliyeen ciidamada kumaandooska ah ee Maraykanka bishan 2-deedii, waxaana weerarkaasi uu ka dhacay guri uu ka deganaa Sh. Usaama magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan.
Weerarkii lagu khaarijiyey hogaamiyihii Al-qaacida ayaa la fuliyey iyada oo aann lala socodsiin wadanka uu falku ka dhacay ee Pakistan, waxana ay talaabadaasi mugdi gelisay cilaaqdkii labada dal.
Mudaharaadyo aad u balaaran ayaa maanta oo Jimca ah ka dhacay meelo badan oo ka mid ah caalamka, waxaana dadku ku dhawaaqayeen hal-ku-dhigyo liddi ku ah Maraykanka iyo ereyo lagu taageeray Al-qaacida iyo hogaamiyhii la dilay; waxana hadalaas ka mid ahaa ?ha dhaco Maraykanku, ha dhaco ha dhaco argagaxiye Maraykan?. Carada iyo diidmada Maraykanka ayaa meeshii ugu saraysay abid ka maraysa caalamka Islaamka.